Mgbasa mkpụrụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Atiya Mgbasa mkpụrụ
Ngwuruzu oru ugbo nke akuku arugula na ala ozo
Nnukwu ụlọ ahịa na-enye anyị nhọrọ dịgasị iche iche nke herbs na ngwa nri, ma ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụlọ na-ahọrọ ịmalite onwe ha. Ọ bụrụ na i nwere atụmatụ, gịnị ma ị gbalịa? Na ego ole na ole, ị ga-enweta ọ bụghị naanị owuwe ihe ubi nke akwụkwọ ndụ ọhụrụ, kama ọ na-atọkwa ụtọ, na-elekọta mkpụrụ osisi na-eto eto ma na-echere ya.
Atụmatụ nke ịkọ nke stalked celery: iwu nke akuku ma na-elekọta
Celery bụ nri bara uru nke nwere ọtụtụ ihe bara uru. Ọ bụkwa ihe ngwọta. Osisi ahụ na-eme ka ọ ghara ịka nká, kpochapụ usoro ahụ ụjọ, nyere aka mgbaze ọrụ nke ọma ma mee nke ọma na usoro obi. Ị ma? Celery bụ ngwaahịa kachasị mma maka ọnwụ.
Fennel: kụrụ na ilekọta ụlọ ha n'oge okpomọkụ
Fennel, ma ọ bụ ọgwụ na-ere ọgwụ, ọdịdị ya dị nnọọ ka dill nkịtị, ọ bụ ezie na o nwere ọdịiche dị iche iche. N'ime ndị na-akọ ubi, osisi a anaghị adịkarị, ebe ọ bụ na usoro nke na-eto eto na-ewe oge. Ma n'ime ndị na-elekọta ubi, e nwere ndị nwere mmasị na esi akụ ma na-eto fennel na mba ahụ.
Ntak emi Kalanchoe oge ntoju, ihe na-eme na nke a
Kedu ihe na-eme na akụ ahụ mgbe orchid adaala? Aro maka igbutu osisi azu mgbe nwa osisi dara
Esi esi mee onye na-azụ anụ kpalakwukwu
Broiler COBB 500: atụmatụ nke na-eto eto n'ụlọ
Jiri ogwe aka gị rụọ ogige ubi
Onye na-akwado osisi sitere na mmehie - cyclamen ihe ọṅụṅụ
Anyi na-acha uhie uhie: na-eto eto n'ulo
Kedu ihe nduku na-eme n'okpuru mulch, olee ihe ndị dị mkpa maka ụdị ihe ọkụkụ na otu esi ebu ya?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Mgbasa mkpụrụ